Must-have Electronic Accessories for Maximum Productivity | အလုပ်စားပွဲပေါ်မှာ ရှိထားသင့်တဲ့ ခေတ်မီ Accessories ၅မျိုး – SUNNY Tech News
Posted byDaxDo 20th Nov 2020 22nd Nov 2020 Posted inUncategorized
အလုပ်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြီးအောင် လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ ဟိုပစ္စည်းထယူရ၊ ဒီပစ္စည်းထယူရနဲ့ နှောင့်နှေးနေတာမျိုးတွေရှိလား? ထိုင်ရာကနေထစရာမလိုပဲ အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးမယ့် Electronic Accessories တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
(1). Digital Display 4USB Charger
လုပ်ငန်းသုံးဖုန်း ၊ အိမ်သုံးဖုန်း နဲ့Tablet တွေကို တစ်ချိန်ထဲမှာ အားသွင်းထားလိုက်ရင် အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခါ အဆင်သင့်သုံးရုံပါပဲ။ Devices (၄) ခုကို တစ်ချိန်ထဲမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းနိုင်တဲ့ USB Charger ရှိထားရင် ပလပ်ပေါက်မလောက်တဲ့ပြဿနာ မကြုံရတော့ဘူးပေါ့။ ထမပေါက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Explosion-proof charger ဖြစ်ပြီး Digital display ပါဝင်တာမျိုးကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊
Buy Baseus Digital Charger with best deals here.
(2).4in 1 Multifunctional Bluetooth Speaker Fan
ပန်ကာ၊ Bluetooth speaker၊ Powerbank၊ Flashlight စတာတွေက အလုပ်စားပွဲမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ခုစီလိုက်ရှာမနေရအောင်4in 1 fan တစ်လုံးသာ ဝယ်ထားလိုက်ပါ။ အားအပြည့်သွင်းထားရင် ပန်ကာကို ၁၀နာရီအထိသုံးနိုင်ပြီး Bluetooth speaker ဆိုရင်တော့ ၁၅နာရီ၊ Flashlight သီးသန့်ဆို ၂၄နာရီထိ အသုံးခံပါတယ်။ Power bank အနေနဲ့သုံးချင်ရင် အပေါ်ပိုင်းကပန်ကာကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ အားသွင်းဖို့ port ကိုတွေ့ရမှာပါ။ 4000Mah USB backup charger တစ်ခုနီးပါး အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Buy4in 1 Multifunctional Bluetooth Speaker Fan with best deals here.
(3). Eye Protection Desk Lamp
ညဘက်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့၊စာလေ့လာဖို့အတွက် Desk Lamp တစ်လုံးကတော့ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ မျက်လုံးမညောင်းပဲ အဆင်ပြေပြေအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Eye protection LED ပါတဲ့ စားပွဲတင် Lamp မျိုးနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ မီးလင်းရုံအပြင် လက်ရှိအခန်းအပူချိန်၊ Date၊ Time နဲ့ Alarm ပါပေးလို့ရမယ့် Digital display ပါရင် အလုပ်လုပ်ချိန်ကိုလည်းမှတ်လို့လွယ်ပါတယ်။ မီးပျက်ချိန်တွေမှာပါ အဆင်ပြေအောင် ပလပ်ထိုးသုံးလို့ရသလို Battery နဲ့ပါအသုံးပြုနိုင်မယ့် Desk Lamp မျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
Buy Remax Time LED Eye Protection Desk Lamp RT-E185 here.
(4). Vacuum Flask with Temperature Display
ကော်ဖီခွက်အနားမှာရှိနေမှ အလုပ်လုပ်ရတာမြန်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ အပူချိန်ထိန်းနိုင်တဲ့ Smart Flask မျိုးက လုံးဝသေချာပေါက်လိုတဲ့ပစ္စည်းပါ။ Smart Flask တွေဟာ ဓာတ်ဘူးအဖုံးပေါ်မှာ LCD touch screen ပါဝင်ပြီး အဖုံးကိုထိလိုက်ရင် လက်ရှိရေအပူချိန်ကိ ပြသပေးပါတယ်။ 24 နာရီပတ်လုံး အပူကိုထိန်းထားနိုင်ပြီး BPA-free ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ဘူးမျိုးဆိုရင် ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေရင်း ကော်ဖီအေးသွားမှာ၊ အချိန်အကြာကြီး ဓာတ်ဘူးထဲထည့်ထားလို့ ရောဂါဖြစ်မှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
Buy Portable Intelligent Flask with Temp Display at best value here.
စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကို သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်နေအောင် အခန်းတွင်းစိုထိုင်းဆကို တစ်ချိန်လုံးထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ ရေငွေ့ထုတ်စက်တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ရေခဏခဏထမဖြည့်ရအောင် capacity များများဆန့်ပြီး ရေကုန်ရင်အလိုလိုပိတ်သွားစေမယ့် water sensor ပါတဲ့ humidifer မျိုးနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပါ။
Getaperfect humidifier at best value here.